क्याप्शन फोन प्रशंसापत्र - Konnekt
अरूले के भनिरहेका छन् बारेमा क्याप्सन भिडियोफोन
रडनी (युके) को लागि जीवन परिवर्तनकर्ता
मँ तपाईंलाई भर्खरको मात्र बताउन चाहान्छु कि यसले हाम्रो सबै जीवनमा कस्तो ठूलो भिन्नता राख्यो।
कस्तो ठूलो भिन्नता! जडान द्रुत छ, तस्विर स्पष्टता राम्रो छ - र किनकि रडनी गहिरो बहिरा छ, उपशीर्षक एक अविश्वसनीय मद्दत हो।
रडनी एकदम स्पष्ट छ ... यो गरेको भिन्नता अविश्वसनीय छ!
- डोरोथी, श्रीमती।
थप पढ्न क्लिक गर्नुहोस् ...
यसले मेरो बेकन बचायो
मलाई एक डाक्टर साथीले केहि बर्ष पहिले भनिएको थियो कि म एक आपदा क्षेत्र हो।
मैले सोचे कि त्यो एक बिट बाक्लो मा राखिएको थियो तर हालै मा म सोच्न थालेको छु सायद उनी सही थिए।
आज रात मेरो बिडेट को पछाडि एक जडान अलग आयो र पानी जताततै बग्न थाल्यो। मेरो कमजोर हातहरु यो एक साथ फिर्ता धकेल्न सकेन र म धेरै र अधिक पानी मा उभिएको थियो। अन्ततः। बारम्बार मेरो आपतकालीन घण्टी बजाएर कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त गरीरहँदा मलाई याद भयो कि पानीको कुकुर मात्र मेरो ढोका बाहिर थियो। यसलाई बन्द गरीयो र पानी कम हुन थाल्यो तर तल इकाई को छत को माध्यम बाट टपकिरहेको थियो। आधा घण्टा पछि मैले संकेत गर्न शुरू गरें कि मलाई मद्दत चाहिन्छ कसैलाई उनी सुतिरहेकी थिइन् र लुगा लगाउनु परेको थियो।
मैले उसलाई सोध्न मन लाग्यो यदि उनी पक्का थिइन् कि उनी आफ्नो कानको घण्टी सम्झन्छन् तर गर्न सकेनन्। कसैले मँ बस्ने सेवानिवृत्ति परिसर को प्रबन्धक लाई सम्पर्क गरें र उनले एक प्लम्बर पठाइयो जो भर्खरै मात्र, लगभग १ बजे, प्रस्थान गरीयो, गल्ती तय गरीयो जसले समस्याको कारण बनायो।
म अझै पनी एक धेरै गीला कालीन मा को बारे मा sloshing छु। म अब सुत्न जान्छु
मेरो दिए पछि Konnekt मेरो बेकन फेरि बचत को लागी एक अनुमोदन प्याट।
त्यस्तै गरी म एक प्रारम्भिक निद्रा छैन।
निस्सन्देह भोलि फेरि सहयोगीहरुको भीड र भारी खर्च ल्याउनेछ।
अर्को रोमाञ्चक एपिसोड भन्दा पहिले तपाइँको सास नलगाउनुहोस्।
विन्डोज को लागी मेल बाट पठाइयो
COVID को समयमा विश्वव्यापी परिवार देख्छ
फिन्चले, उत्तर लन्डनकी हजुरआमा लिली उनको ९० को दशकमा छिन् र उनको फोनमा सञ्चार गर्ने क्षमतालाई असर गर्ने श्रवण कमजोरीको साथ बाँचेकी छिन्। उनी आफ्नो स्वास्थ्य र कोभिड प्रतिबन्धका कारण लामो समयदेखि नदेखेका परिवार र साथीहरूसँग सम्पर्कमा रहन धेरै इच्छुक छिन्। धेरै बूढा मानिसहरू जस्तै उनको परिवार नर्वे सहित विभिन्न ठाउँमा टाढा छ।
यो भिडियो हाम्रो परीक्षणको पहिलो दिनमा बनाइएको हो Konnekt क्याप्सन भिडियोफोन।
यहाँ उनको बारेमा के भन्न छ छ।
ओठ पठन प्लस क्याप्शन
Hi Konnekt टोली,
मेरी आमाले यसको प्रयोग गर्न थाल्नुभयो Konnekt १२ महिना अघि भिडियोफोन क्याप्शन गर्दै र यो अमूल्य साबित भएको छ।
आमाको 5% भन्दा कम सुनुवाई छ र श्रवण सहायता र कोक्लियर इम्प्लान्टमा निर्भर गर्दछ। को Konnekt उनको क्याप्शन प्राप्त गर्नका साथ-साथ कुराकानी लाईप-पढ्न अनुमति दिन्छ।
आमा अब गम्भीर पागलपन छ र एक वृद्ध हेरचाह सुविधा को लागी सारिएको छ। को Konnekt भिडियोफोन उनको साथ सारियो र सेटअप निर्बाध थियो, तपाईको टोलीको अद्भुत समर्थन द्वारा।
उनको डिमेन्शियाको बावजुद आमाले भिडियोफोनलाई संचालन गर्न सजिलो पाउँदछ, र यो तत्काल परिवारसँग सम्पर्कमा रहनको लागि यो एक उत्तम तरिका हो। हामी यस उपकरणको लागि बढी आभारी हुन सक्दैनौं।
- मल ग्रिमोन्ड, छोरा।
Nada भिडियोफोनमा क्याप्शन गर्दै 93 मनाउँछिन्
मलाई लाग्दैन कि त्यहाँ 93 मैनबत्तीहरू समात्न सक्ने केक छ!
जब आमालाई नर्सहरूले उहाँलाई भन्न खोजिरहेका महत्त्वपूर्ण कुराहरू बुझ्न गाह्रो भएको थियो, उनीहरूले उनको कोठामा हुँदा भिडियोफोनमा पनि बोलाए ताकि उनले क्याप्सनहरू पढ्न सकून् भनी सुनिश्चित गर्न।
हामीले उनको भिडियोफोनमा वार्षिक मेडिकल समीक्षा पनि गर्यौं। यो महान थियो। मैले आरएन र मेरी आमालाई देख्न सक्थे र उनीहरूले मलाई देख्न सक्थे। आश्चर्यजनक।
आज आमाको ९३ औँ जन्मrd जन्मदिन र कोभिड प्रतिबन्धका कारण म उनीसँग मनाउन क्यानबेरा जान सकिन, तर मैले उनलाई अहिले नै फोन गरे र जन्मदिनको शुभकामना गाएँ। उनको अनुहार हेर्न पाउँदा धेरै अचम्मको थियो किनभने उनले मलाई पाइन्सले दिएको पार्टीको बारेमा बताइन् र मानिसहरूले उनलाई दिएका उपहारहरू हेर्नुहोस्।
उनको खुशीमा यसरी प्रत्यक्ष रूपमा बाँड्न पाउँदा धेरै राम्रो लाग्यो।
तिमीलाई धेरै धन्यवाद Konnekt, म कल्पना गर्न सक्दिन कि हामी तपाईं बिना यो धेरै कठिन समय कसरी व्यवस्थापन गर्ने थियो।
- क्यारिन, छोरी।
पढ्नुहोस् यसले कसरी नाडाको जीवन परिवर्तन गर्‍यो
कोभिड: क्याप्सन र लिप-रिडिङ ब्रिज परिवार
म तपाईंलाई पर्याप्त धन्यवाद दिन सक्दिन Konnekt भिडियोफोन। यो हाम्रो परिवारको लागि यस्तो आशिष् भएको छ।
मैले पहिलो पटक २०२० को शुरुमा यसको बारेमा सुनेको थिएँ र क्वीन्सल्याण्डको सनसाइन कोस्टमा बस्दा क्यानबेरामा एक्लै बस्ने मेरी वृद्ध आमासँग कुरा गर्न र हेर्न पाउँदा धेरै खुसी भएँ। कोविड प्रहार हुँदा आमासँग केही हप्ताको लागि मात्र भिडियोफोन थियो। उहाँलाई सम्पर्क गर्न र उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर हेर्न सक्षम हुनु हाम्रो लागि कस्तो राहत हो। उसलाई चाँडै बानी पर्यो र उसले चाहेको बेला मलाई कल गर्न सक्थी। हामी धेरै दिन बोल्छौं, कहिलेकाहीँ दुई मिनेटको लागि मात्र, कहिलेकाहीं आधा घण्टा वा सो भन्दा बढी। यो सम्भव भएको हो किनभने क्याप्शनहरू धेरैजसो उत्कृष्ट हुन्छन् किनभने आमाले अहिले नै सुन्न सक्नुहुन्न। हामी हाँस्छौं जब स्काइपले मैले भनेको कुरा बुझ्दैन र आमाले एक वा दुईवटा अनौठो शब्दहरू पाउँछन्। कहिलेकाहीँ क्याप्शनहरूले काम गर्दैन, मलाई लाग्छ कि इन्टरनेटको कमजोरीले गर्दा, तर हामी अझै पनि कुराकानी गर्न सक्छौं किनकि आमाले मेरो ओठ पढ्न सक्नुहुन्छ किनभने उहाँले मलाई देख्न सक्नुहुन्छ। म उसलाई देखेर र सुन्दा धेरै खुसी छु। आमाले आफ्नो सूचीमा भएका कसैलाई पनि सजिलैसँग, बटनको एक थिचेर कल गर्न सक्षम भएको मन पराउनुभयो। नियमित फोन चलाउन नसक्दा उनी निकै एक्लो महसुस गरिरहेकी थिइन् ।
गत वर्ष सेप्टेम्बरमा आमालाई नराम्रो पतन भयो र एज केयरमा सर्ने निर्णय गरियो त्यसैले पक्कै पनि भिडियोफोन उनको साथ गयो। सुरुमा हामीसँग केही त्रुटिहरू थिए तर Konnekt समस्याहरू समाधान गर्न सजिलै उपलब्ध थियो।
यो धेरै राम्रो छ जब म फोन गर्छु, उहाँको हेरचाहकर्ताहरू मध्ये एक आउँछ र म उहाँहरूलाई पनि भेट्न पाउँछु र म मेरी आमाप्रति उहाँहरूको दया देख्छु। म धेरै टाढा छु जस्तो आराम।
- क्यारिन मर्फी।
क्याप्सन परिवार सम्पर्क सक्षम गर्नुहोस्
बस एक छिटो नोट तपाइँ यन्त्र र सेवा द्वारा प्रदान गरीएको थाहा दिन Konnekt बिल्कुल उत्कृष्ट, अविश्वसनीय रूप बाट पेशेवर सबै तरीकाले तर मैत्री र सहयोगी भएको छ।
यो सेवा को मतलब यो हो कि हामी मध्ये धेरै यी धेरै चुनौतीपूर्ण समयहरु को माध्यम बाट मेरी हजुरआमा संग सम्पर्क मा रहन सक्षम छौं जब हामी मध्ये धेरै उसलाई व्यक्तिगत रूप मा हेर्न को लागी यात्रा गर्न सक्दैनौं।
यो उनको अनुहार मा एक मुस्कान ल्याईयो हरेक पल्ट उनी मध्ये एक देख्न सक्छिन् महान नातिनीहरु भिडियो मा र उनीहरु। साँच्चै एक ठूलो तपाइँ र सम्पूर्ण टीम को लागी धन्यवाद।
- जोश इभान्स।
१०104 मा क्याप्शन कल
सुन्नुहोस् कसरी क्रिसकी आमाले गम्भीर श्रवण शक्ति गुमाएको छ, क्याप्शनिंग भिडियोफोनलाई परिवार र साथीहरूसँग कुराकानीको लागि प्रयोग गर्‍यो - क्याप्शनको साथ र भिडियो कलको समयमा, ओठको पठन पनि।